I-Wholesale B635A Ukubumba i-mahcine Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki |Lu Young
I-B635A yokubunjwa kwemahcine
Ithebula lokusebenza le-bullhead planer lingazungezisa kwesokunxele nakwesokudla, futhi ithebula lokusebenza linomshini wokuhamba ngokushesha ovundlile noqondile;isetshenziselwa ukuhlela izindiza ezithambekele, ngaleyo ndlela yandise ububanzi bokusetshenziswa.
I-bullhead planer iyindiza eyenza ukunyakaza okuphindaphindayo okulandelanayo.Inqama iphethe indiza.Iqanjwe ngoba umbambi weblade ongaphambili wenqama ufana nekhanda lenkunzi.Amapulani e-Bullhead asetshenziselwa kakhulu abadwebi bekhanda lezinkunzi abancane nabaphakathi nendawo.Ukunyakaza okuyinhloko kwe-bullhead planer kuqhutshwa umshini we-crank-rocker, ngakho-ke isivinini esihambayo senqama asilingani.
1. Ithebula lokusebenza le-bullhead planer lingazungezisa kwesokunxele nakwesokudla, futhi ithebula lokusebenza linendlela evundlile neqondile ehamba ngokushesha;isetshenziselwa ukuhlela izindiza ezithambekele, ngaleyo ndlela yandise ububanzi bokusetshenziswa.
2. Isistimu yokuphakelayo yeplanethi isebenzisa indlela yekhamera enamazinga angu-10 okuphakelayo.Kubuye kube lula kakhulu ukushintsha inani lommese.
3. Iplanethi ye-bullhead ifakwe indlela yokuphepha yokulayisha ngokweqile ohlelweni lokusika.Lapho ukusika kulayishwa ngokweqile ngenxa yokusebenza ngokunganaki noma amandla angaphandle, ithuluzi lokusika lizoshelela ngokwalo, futhi ukusebenza okujwayelekile kwethuluzi lomshini kuqinisekisiwe ngaphandle kokulimala ezingxenyeni.
4. Phakathi kwenqama nomhlahlandlela wombhede, kanye ne-gear pair enesivinini kanye nendawo eyinhloko ye-sliding guide, kukhona amafutha okugcoba avela ku-oil pump for lubrication ejikelezayo.
Uhlelo lokuthambisa kanye nemephu yendawo yendawo ye-bullhead planer
Izingxenye ezihamba phambili zethuluzi lomshini, njengesitimela somhlahlandlela wenqama, umshini we-rocker, i-gearbox, ibhokisi lokuphakelayo, njll., zigcotshwa yiphampu kawoyela, futhi ukunikezwa kukawoyela kungalungiswa njengoba kudingeka.
Lapho ithuluzi lomshini liqalwa, iphampu kawoyela iqala ukusebenza.Iphampu kawoyela imunca uwoyela wokugcoba asuka echibini likawoyela lesisekelo sombhede ngesihlungi sikawoyela, bese iwadlulisela kusihlukanisi sikawoyela namapayipi ukuze kugcotshwe ingxenye ngayinye yethuluzi lomshini.
1. Lapho ugongolo luphakanyiswa futhi lwehliswa, isikulufu sokukhiya kufanele sikhululwe kuqala, futhi isikulufu kufanele siqiniswe lapho sisebenza.
2. Akuvunyelwe ukulungisa ukushaywa kwenqama ngesikhathi sokusebenza kwethuluzi lomshini.Uma ulungisa ukushaywa kwenqama, akuvunyelwe ukusebenzisa indlela yokuthepha ukuze ukhulule noma uqinise isibambo sokulungisa.
3. Ukushaya kwenqama akufanele kweqe uhla olushiwo.Isivinini esiphezulu asivunyelwe uma usebenzisa i-stroke ende.
4. Uma ithebula lokusebenza linikwa amandla noma linyakaziswa ngesandla, naka umkhawulo we-screw stroke ukuze uvimbele isikulufu namantongomane ukuthi angahlanganisi noma alimaze ithuluzi lomshini.
Ubukhulu bokusika ubude(mm)
Ibanga eliphezulu ukusuka phansi kwenqama ukuya endaweni yetafula(mm)
Ithebula eliphakeme lokuhamba okuvundlile(mm)
Ithebula eliphakeme lokuhamba okuqondile(mm)
Indawo ehamba phambili yeplanethi ukuya embhedeni ngaphandle kwebanga eliphakeme
Ukukhishwa okuphezulu kwenqama
I-engeli ephezulu yokujika yethebula lokusebenza (akukho vice)
I-engeli ephezulu yokujika yetafula lokusebenza(i-vice)
I-turret Umkhawulo wokuhamba oqondile
Inani lokushaywa kwenqama ngomzuzu
32, 50, 80, 125, izikhathi imiz
Inqama emuva naphambili inani lokudla kwetafula
Isondo eliyindilinga izinyo (imile)
Isondo eliyindilinga izinyo (elivundlile)
Izinyo elinesondo eliyindilinga 4 ( mpo)
Izinyo elinesondo elingu-4 (elivundlile)
Okwedlule: I-CD6241 Manual lathe
Olandelayo: BK5030 cnc mpo Slotting umshini wensimbi
CK6180 esindayo duty cnc metal turning lathe machi...
ck6150 Ukunemba okuphezulu kwesiteshi sikagesi se-cnc ma...
GB4230 China intengo yefekthri band sawing umshini ...
VMC420 China 3 axis cnc umshini wokugaya wensimbi
VMC1270 ukunemba okusezingeni eliphezulu cnc metal fanuc cnc isigayo...
CK6163 Umsebenzi osindayo ovundlile amathuluzi esiteshi esi-4 cn...